एफएनसीसीआई वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित, अरु क–कसले जिते ?
आईतबार ४ माघ, २०७७
गृहपृष्ठ » अर्थ » एफएनसीसीआई वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित, अरु क–कसले जिते ?
शनिवार १३ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। उनी किशोरकुमार प्रधान समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा चुनाब लडेका थिए।
उनले ६२ मत पाएर विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी उमेशलाल श्रेष्ठ थिए। उनले ३७ मत पाएका छन्। उमेश चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहबाट चुनाब लडेका थिए। अञ्जन करिब डेढ दशकदेखि महासंघमा सक्रिय छन्। उनले १६ वर्ष महासंघको कार्यसमितिदेखि विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका छन्।
उद्योग समितिको सभापति, दुई कार्यकाल राजस्व समितिको सह–सभापति भएर र करिब नौ वर्ष रोजगारदाता परिषद्को सदस्य भएर श्रेष्ठले काम गरेका छन्। उनी लक्ष्मी समूहका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
पोखरामा लक्ष्मी मिठाई पसलबाट व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेको लक्ष्मी समूह अहिले देशकै ठूलो व्यवसायिक घरानामा स्थापित छ। २०३० सालमा सुरु भएको मिठाई पसलसँगै दोस्रो पुस्ताका अञ्जनले पोलिथिन उद्योग स्थापना गरे। प्रजातन्त्र स्थापनासँगै आएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेपछि यो समूहले २०६० सालमा सुजल डेरीमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को पोखरा शाखा किनेर डेरी उद्योगमा हात हालेर पाउडर मिल्कदेखि कन्फेक्सनरी उत्पादन थाल्यो। २०६६ सालमा हुन्डाई मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता बनेपछि यो समूहको व्यवसायिक विस्तार फराकिलो बन्यो। पछिल्लो समयमा समृद्धि स्टील स्थापना गरिसकेको यो समूहले हस्पिटालिटी र खाद्यान्न लगायतका उद्योगमा समेत हात हाल्दैछ।
आज भएको निर्वाचनको जिल्ला नगर सदस्यतर्फको पनि मत गणना सकिएको छ । यस समूहबाट कार्यकारिणी सदस्यमा कुल १८ सदस्य पदका लागि ३८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये ११ जना किशोर प्रधान प्यानलका र ७ जना चन्द्र ढकाल प्यानलबाट निर्वाचित भएको बताइएको छ ।
निर्वाचित हुनेमा राजन श्रेष्ठ (७९ मत), तारानाथ घिमिरे (७२ मत), शोभाकान्त पौडेल (७० मत), कमल कुमार श्रेष्ठ (७० मत), गजेन्द्र कुमार भगत (६८ मत), चक्र बहादुर अधिकारी (६७ मत), अरुणराज सुमार्गी (६६ मत), देव कुमार श्रेष्ठ (६४ मत), रामेश्वर मानन्धर (६३ मत), कमान बहादुर खड्का (६२ मत), सुरकृष्ण वैद्य (६१ मत) छन् ।
यस्तै, कुविर कुमार श्रेष्ठ (५८ मत), डिबी बस्नेत (५८ मत), गोपाल केडिया (५५ मत), महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ (५४ मत), उमेश डालमिया (५३ मत), किशोर कुमार आचार्य (५२ मत) र अमृत भट्टचन (५१ मत) पनि जिल्ला नगरबाट महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला नगरतर्फको पूरै १०५ भोट नै खसेको थियो । त्यसमध्ये ३ वटा बदर भएको हो ।
साताको पहिलो दिन आज सुनको मुल्यमा भारी गिरावट
भारतले उठाएको एक कदमले नेपालमा ९० प्रतिशत तेल उद्योग धरासायी
जलविद्युत् लगानी कम्पनीद्वारा नौ वर्षमा रु. १० अर्ब ८८ करोड ऋण लगानी
मेगा बैंकको १० औं बार्षिक साधारणसभा : १३.०५ प्रतिशत लाभांश पारित
फेरी ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा हुँदै छ ?
साधारण शेयरमा आवेदन गर्नेको सङ्ख्यामा नयाँ रेकर्ड
सुनको मुल्यमा भारी वृद्धि
सहकारीले अब गुनासो गर्न छाडेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ
नेपालमा सोमबार पनि सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
प्रतिव्यक्ति रु दुईबाट शुरु गरिएको बचत वार्षिक रु छ करोड बढी
साताको पहिलो दिन आज सुनको मुल्य दुई हजार भन्दा धेरैले घट्यो
बैंकले वार्षिक मात्र २ प्रतिशत व्याजदरमा १ करोडसम्म ऋण दिने
यसकारण अब शनिबार पनि बैंक खुला रहने
व्यवसाय सञ्चालनको माग
यति धेरै संख्यामा लोक सेवा आयोगले खुलायो जागिर [ विज्ञापनसहित ]